Wargeyska ugu Caansan Dalka Taiwan oo Waraysi Diblumaasiyadeed oo Xiiso badan la Yeeshay Safiirkii hore ee Somaliland u fadhiyay dalka isu-taga Imaaraadka Carabta Amb. Hassan Yassin Hirad.
Thursday July 23, 2020 - 18:14:08 in Wararka by Super Admin
Canada(Xogreebnews)- Wargeyska ugu weyn dalka Taiwan ee lagu magacaabo Thetaiwantimes, ayaa Waraysi diblumaasiyadeed la Yeeshay Safiirka hore ee Somaliland u fadhiyey dalka isu-taga Imaaraadka Carabta Amb. Hassan Yassin Hirad. Kaasoo mudooyinkii u dambeeyey qoraalo Diblumaasiyadeed ku baahinayey bartiisa Twitter.
Wargeysku waxa uu Diblumaasi Xasan ka Waraystay arrimo dhowr ah, oo ay kamid tahay inuu Bulshada Taiwan isbaro iyo teetalkiisi hore ee safiirnimo siduu ku yimi, waxa kaloo heerkiisa aqooneed iyo weliba waxbarashadiisi.
Waxa kaloo, Wargeysku Safiirka ka Waraystay xidhiidhka Saaxibtimo ee Somaliland iyo Taiwan, waxanu u sheegay in mudo dheer ay xidhiidho Saaxibtimo lahaayeen Taiwan iyo Somaliland, xidhiidhadaas oo soo bilaabmay 1998-kii xiligaas oo u Somaliland Hoggaamiye ka ahaa Alla ha u naxariistee Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal. Xidhiidhka 1998-kii u bilaabmay Somaliland iyo Taiwan waxa uu safiirku u sheegay inuu ahaa mid ganacsi. Sidoo kale waxa uu Safiirku Wargeyska u sheegay in laga midho-dhaliyey xidhiidhkaas, waxanu intaa ku daray Safiirku in Xukuumada Taiwan ay Somaliland u fidiyeen adeegyo caafimaad iyo waxbaraasho.
Geesta kale, waxa uu Wargeysku waxka waydiiyey caqabadaha ka hor iman karaa Xidhiidhka Saaxibtimo ee Somaliland iyo Taiwan. Waxanu kaga jawaabay in caqabado jiraan, hase-yeeshee laga gudbi karo, hadii labada dal la yimaadaan isku duubni Siyaasadeed iyo Samir la muujiyo. Waxanu intaa ku daray in xulufo Siyaasadeed lala sameeyo Dawladaha kalee dunida.
Wargeysku waxa kaloo uu Diblumaasigan reer Somaliland waydiiyey maku talo jirtaa inaad soo booqato Taiwan, waxanu kaga Jawaabay waan ku talo-jiraa waayo Taiwan waa dal aan jecelaahay, hadii Korono-Fayras baxo insha allah waan imanaya Taiwan. Waxa kaloo uu Wargeysku waydiiyey sidee Shacabka JSL u arkaan Xidhiidhka soo ifbaxay ee Somaliland iyo Taiwan. Waxanu Safiirku Wargeyska u sheegay in Shacabka Jamhuuriyadda Somaliland u heelan yihiin Xidhiidhka Saaxibtimo ee Somaliland iyo Taiwan, waxa kaloo uu Wargeyska uga waramay in Safiir Somaliland u Magacawday Taiwan Maxamed Xaaji, isla markaana Shacabka Jamhuuriyadda Somaliland ay wada taageersan yihiin Safiirkooda Taiwan.
Safiirka Somaliland ee Taiwan waxa uu ka midho dhalin doonaa Saaxibtimo labada dal ayuu yidhi, ayuu yidhi Safiir hore Xasan Yaasin Hirad.
Waxa kaloo uu safiirku Carabta ku dhuftay in si weyn loo xoojin doono Xidhiidhka Siyaasadeed iyo ka ganacsi ee labada dal. Halkan hoose ka Akhri Warbixin Wargeyska.
He was later selected to serve his country as the Ambassador of Somaliland to the United Arab Emirates and Head of Mission, where, in his own words "I had the privilege of re-shaping the focus of (the) relationship between Somaliland and the UAE.
More recently, in Canada, he became a Global Peace Ambassador and a voluntary advocate for Somaliland recognition.
As a former ambassador to the UAE, did you foresee the announcement earlier this month that will see Hargeisa and Taipei exchange ambassadors once the COVID-19 pandemic has been defeated?
Any message to the people of Taiwan learning about our newest diplomatic ally?
I would like to tell them that our nation is a real ally to Taiwan, and that our people are eager to learn from your success story.
Categories: Opinion, Somaliland, Taipei, World
Tags: Africa, ambassador, China, Coronavirus, COVID-19, Global Peace Ambassador, Hargeisa, Somalia, Somaliland, taipei, Taiwan, UAE